Nkenke akụkọ ihe mere eme nke Mac OS sistemụ arụmọrụ Akụkọ akụrụngwa
Mmanya na-egbu egbu | | Apple, software
N'oge a anyị ga-arara onwe anyị nye na-ekwu maka akụkọ ihe mere eme nke Sistemụ Mac OS. Versiondị mbụ nke Mac oSSistemụ 1 nwere desktọọpụ, windo, akara ngosi, òké, menus na akwụkwọ mpịakọta. Oge ọ bụla kọmputa malitegharịrị, ozi niile ga-apụ n'anya. Na mgbakwunye, ịnweghị ike ịrụ ọrụ na ngwa abụọ n'otu oge n'ihi na enweghị enweghị ebe nchekwa ọ bụla. Ọ gaghị ekwe omume ịmepụta folda n'ime folda ọzọ, ebe ọ bụ na echekwara faịlụ niile n'otu ụzọ na disk.
Naanị na 1988, yana sistemụ 6, agbakwunye agba. Na nhọrọ nke "ichicha Disk" a tinye bọtịnụ iji nwee ike ịkagbu ihe a, a gbakwunyere nhọrọ iji gosipụta ụdị mbipute nke faịlụ ahụ.
Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, na 1990, sistemụ 7 pụtara nnukwu mgbanwe software maka oge a, ebe nchekwa ahụ mere ka ikike ya ruo 32b, nke mere ka Macs jiri ihe karịrị 8 MB Ram na sistemụ arụmọrụ.
Nke iri na nke ikpeazụ nke sistemụ arụmọrụ Apple bụ Mac OS X, nke ewepụtara na 2002. Ọ bara uru ịkọ na sistemụ arụmọrụ a sitere na UNIX. Ọ dị mkpa iburu n'uche na nsụgharị a webatara ọtụtụ ọrụ ọhụrụ iji nye ndị ọrụ ya ọkwa dị mma ma kwụsie ike karịa ụdị nke gara aga (Mac OS 9). N'ime ha anyị nwere ike ịkọwa ọtụtụ mgbochi na nchekwa echekwara, nke mere ka usoro sistemụ nwee ike ịme ọtụtụ ngwa n'otu oge ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Obere akụkọ banyere Mac OS sistemụ
Ihe ịga nke ọma 10 nke teknụzụ 2010
Verizon inye LTE ihe karịrị ọdụ ụgbọ elu 60 na obodo 68 dị na US